Indlela Yokuqeda Izimpukane Ngaphandle Isinyathelo Ngesinyathelo
Isikhathi Iposi: 08-12-2020
thola ukuthi izimpukane zihlala kuphi futhi zizalela kuphi - nokuthi zingena kanjani endlini. Uma lokhu sekwaziwa, ukuthuthwa kwendle, ukukhishwa inyumbazane, kanye nokulawulwa kwemishini noma kwamakhemikhali kuzosiza ukukugcina kungangeni. Ukuhlolwa Kwempukane Yezindlu Ukuthola ukuthi izimpukane zihlala kuphi futhi zizalanisa kuphi, ...Funda kabanzi »
Gcina Imouse Yendlu Ngaphandle Kwendlu Yakho
Amanye amagundane angenza izilwane ezifuywayo ezinhle, ezimnandi, kepha igundane lendlu aliyona leyo. Futhi lapho igundane lingena ngokungena endlini yakho ngokuqhekeka noma ngegebe noma ngokufunwa odongeni olomile, amabhokisi agciniwe, nephepha, noma izintambo zokwenza isidleke salo - ngenkathi uchama futhi ulahla indle lapho ihamba, ngi ...Funda kabanzi »
Kufanele Ngizibekephi Izicupho Zamagundane kanye Nemibuzo Nezimpendulo Eziyi-11
Amagundane angena kanjani endlini? Wazi kanjani ukuthi unamagundane? Kungani amagundane eyinkinga? Igundane laseNorway neRof Roat yizona zigundane ezimbili ezivame kakhulu ezihlasela amakhaya futhi zingalimaza kakhulu. Okulandelayo eminye yemibuzo evame kakhulu mayelana nalezi zinkukhu ezigundane ...Funda kabanzi »
Umehluko Phakathi Kamagundane Negundane
Ngaphandle kweqiniso lokuthi amagundane namagundane abukeka ahlukile, angomehluko omncane phakathi kwawo. Kubalulekile ukwazi lo mehluko ngoba imizamo yakho yokulawula amagundane izophumelela kakhulu lapho uqonda ngayinye yalezi zinambuzane, indlela eziziphatha ngayo, ukudla ...Funda kabanzi »
Izimpawu Ezijwayelekile Ezi-7 Zokuthi Usenamagundane Noma Amagundane Ekhaya Lakho
Ubunenkinga yamagundane noma amagundane ekhaya lakho, kepha ucabanga ukuthi wena - noma uchwepheshe wezokuphatha izinambuzane owabizele kuye - waqeda wonke amagundane. Kepha wazi kanjani ngokuqinisekile? Ngabe labo tela obathola ngaphansi kwamakhabethe budala noma busha? Ngabe lokho kukufunisisa ...Funda kabanzi »
Yamukela ukuvakashelwa okuvela eqenjini lePelsis
Abaphathi abathathu bemikhiqizo abanolwazi basinikeza isifundo esihle sokwenza ngcono imikhiqizo yethu. Ngasikhathi sinye, ziletha ukwakheka kwemikhiqizo emisha yokukhiqiza lapha.Sizozama konke okusemandleni ethu ukunikela ngemikhiqizo egculisayo kungekudala! Funda kabanzi »
Umqondo Wethu Wensizakalo
I-Cangzhou Jinglong Technology Co, Ltd. isungulwa e-Cangzhou Tianlida Metal Products Co, Ltd., ibhizinisi elaziwa kakhulu elisebenza ngocwaningo nentuthuko, ukukhiqiza, ukuthengisa kanye nokuhlinzeka ngemishini yokulawula eyingozi. Ngisekela ukutshalwa kwemali kwama-millio angama-20 ...Funda kabanzi »